Badbaadada Daaqa? | Martech Zone
Talaado, Disembar 30, 2008 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Waan jeclahay kaftanka Gary Larson ka Dhinaca Fog caan
Shirkadaha ayaa loo maleynayaa inay halis ku jiraan oo waxaan dhamaanteen shuruud ku xirnaa in si uun jirto badbaadada tirooyinka:
Immisa macmiil ayaad leedahay?
Intee in leeg ayaad ku jirtay ganacsi?
Fadlan na sii tixraacyo.
Na sii daraasado kiis tusaale ah oo u dhigma warshadeena, baaxadda shirkadda, wax soo saarka, adeegga, iwm.
Waxaan ka aqrinay qodobkaan [Gali shirkad weyn] oo bixisa aragti kadhan ah, fadlan sharax.
Aynu eegno tusaalayaasha lo'da, iyo cidda aan sannado la soconay:
Shaqaalaha gawaarida ee United
Fifth Third Gordhaw Kadhoofaan
Kooxda PNC Financial Services Group
Shirkadaha Daryeelka Caafimaadka
Maya mahadsanid, anigu dhaqso uma raaci doono lo'da.
Miyaad ku turunturootay?
31, 2008 at 11: 03 AM
Warbaahinta bulshada miyaanay ahayn xoolo ka waxtar badan uun? Waxaan ku raacsanahay in raacida lo'du aysan ahayn, kaligeed, wax weyn in la qabto, laakiin waxaa jira waxyaabo badan oo laga sheegayo xoolaha iyo sumcadda. Adhigu wuxuu noo sheegayaa in Google uu yahay mashiin raadin fiican, waana qirayaa inaan raacay midkaas. Sidoo kale, lo'du waxay tilmaamaysaa alaabooyinka ay ku faraxsan yihiin (Apple) oo aan ku faraxsanayn (GM, Ford).
Su’aashu waxay tahay miyaynaan ku faraxsanayn raacida lo’da, mise si kadis ah ayaan uga tagnay anaga oo dareemay khayaano markii ay xoolo ka tagto wixii ay raacaysay? Qaar badan oo ka mid ah tusaalooyinka kor ku xusan halka ay raaceen en tiro by lo'da, laakiin hadda waxaa looga tagay en tiro by isla lo'da.
31, 2008 at 2: 29 PM
Xaqiiqdii, uma maleynayo in baraha bulshada ay yihiin xoolo hufan - dhamaanteen waxaan ku faafnay beelaheena madaxa banaan (inkasta oo ay isku xiranyihiin) - blogs, twitter, bookmarking social, friendfeed, Ning network, Linked In, Plaxo…. Waxaan u maleynayaa in dadka waaweyni ay bilaabayaan inay samaystaan ​​beelo aad u yar yar oo 'micro' ah halkaas oo ay ka helaan dad leh dhadhan la mid ah, aaminaad, waxbarasho, hibo, hiwaayad iyo sooyaal.
Google runti wuu jajabiyaa natiijooyinka iyadoo loo eegayo ku xirnaanta, sidaas darteed ereyo kaladuwan - “raqiis” iyo “qiimo jaban” waxay siin karaan natiijooyin gebi ahaanba ka duwan qof ujeedadiisu tahay raadinta… iyadoo lagu saleynayo 'sida' raadinta dadka kale iyo backlinks laga helo ilo kale Google waxay u badan tahay boqorka natiijooyinka lo'da aan ku jirin buuggayga.
Waan ku raacsanahay aragtidaada xoolaha. Waxaan kaliya rajaynayaa in dadku aysan si indho la'aan ah u raacin lo'da anymore La iima iibin in natiijooyinka ay inta badan ka fiican yihiin kuwa xun. Waxaan jeclahay dadka su'aal ka keenaya nidaamka oo riixaya baqshadda.